• Thehandheld automatic tire inflatorndeyechokwadi inotakurika otomatiki inflator/deflator.
• Inofambiswa nebhatiri reLithium-Ion rinochajika, rinogara kusvika kumaawa gumi nemashanu anokatyamadza (kushandiswa kunoramba kuripo), anenge 500 inflation cycles.
• Batanidza nendege, isa inodiwa kudzvanywa uye worega izvihandheld automatic tire inflatorita zvakasara (zve deflating kubatanidza hose hazvidiwi).
• Yakavakirwa mukesi yakaoma yeABS, ine 1.5 m hose uye inokwira kusvika ku174 psi pane zvinoshamisa 2500 L/min @ 174 psi.
• Thehandheld automatic tire inflatorinewo mabhatani maviri anorongeka pre-set ekuseta zvakajairwa zvinonetsa nekukurumidza uye nyore.
• Kudzima otomatiki mushure memasekonzi makumi mapfumbamwe
• Yakanakira mota, marori, matirakita, mota dzemauto uye matai endege
• Yakakura iri nyore kuverenga LCD kuratidza ine yambiro inonzwika
• Tough ABS kesi
• Pamwechete calibrated uye akaedzwa, kusangana mureza EEC/86/217
• OPS (Over Pressure Setting) basa rinobvumira vhiri kuti rikwidzwe kune imwe pressure yobva yadzikira otomatiki kuenda kune yakajairika kushanda, inoshandiswa kugadzika matayi pamarimu.
• Pistol grip tire inflator ine geji ine simbi inomutsa ine PVC chivharo chekudzivirira kutsvedza.
• 86mm(3-3/8“) pressure geji (0-7 Bar/100psi) ine bhutsu yerabha isingachinjiki inodzivirira geji kubva pakuora, kuvhunduka nekukanganiswa.
• Pistol grip tire tire inflator ine geji inovakwa neinosimbisa yakaumbwa Nylon imba.
• Pistol grip tire inflator ine geji ine ma swivel geji ekuverenga chero ngirozi, uye inogona kufuratira kuti ichengeterwe.
Inotakurika Air Compressor
● Iyo yakanyanya kudzvinyirira ndeye 150 psi.Iyo inotakurika yemhepo compressor tire inflator inogona kukwidza yakajairika yepakati-saizi vhiri remota kubva pa0 kusvika 35 psi mumaminetsi mashanu.
● Iyo inflator inongozvivhara kana vhiri rematairi rasvika pamutengo wakagara wagadzirirwa, hapana chikonzero chekunetseka pamusoro pekukwira kwemhepo kana kuwedzera.
● Iyo compressor tire inflator inoratidzira yakajeka LED tochi, iyo inogonesa kushanda murima.
● Digital kuratidza inopa kuverenga nyore, Zviyero zvina zviripo: PSI, BAR, KPA, KG/CM.
● The portable air compressor yakashongedzerwa ne3 mamwe ma nozzles ayo anogona kuenderana nese tire remota, bhasikoro, mudhudhudhu, ATV, SUV, mabhora, air metiresi, dziva uye zvimwe zvinoputika.
● Tambo yemagetsi yemamita 3/10 ine plug yefodya uye fiyuzi yekuchengetedza.
● Hose yemhepo inogona kuchengetwa muchikamu pasi pepombi yematayi, pasina chikonzero chekunetseka nezvetambo dzisina kusimba.
● Compact size iri nyore kutakura uye kuchengetedza.Imba yakasimba uye inosanganiswa inopa hupenyu hurefu.
● Iyi mhando yemhando yemhepo inflator / min air compressor inopa kudzvinyirira kwakanyanya kwe150psi kana 10 Bar uye kubuda kwemhepo kwe35L/Min.Tinotenda nemota yakasimba, zvinotora maminetsi kuti inflate vhiri rakaponja kusvika pa35psi.
● The 12V quality tyre inflator inozodzima pakarepo kana vhiri retairi rasvika pamutengo wepreset.Iyo zvakare yakashongedzerwa ne overheat protector.
● Iyo yakavakirwa-mukati lithium bhatiri ine simba rekuisa 4 matai mushure mekuchaja zvizere.
● Chidzitiro cheLCD chedigital chinoratidza pressure yetai muPSI, Bar, KPA, kg.cm, uye backlight inoita kuti iverengeke kunyangwe munzvimbo ine rima.
● DC 12V cigarette plug inoenderana nemota dzese uye inosangana nezvaunoda pakushandisa zuva nezuva nemotokari.
● Super inopenya LED tochi inosanganiswa maviri basa: chena LED yekuvhenekera nguva dzose, uye tsvuku LED yekukurumidzira.
● Iyi mhando yemagetsi inflator yakanakira mota, SUV, bhasikoro, mwenje marori, matai emudhudhudhu.Iwo ekuwedzera matatu nozzles akakodzera emitambo bhora, inflatable dziva, mhepo metiresi, dziva matoyi uye mamwe inflatables.
• The dual foot inflator gauge ine handheld lever throttle iyo inopa kunyatso kudzora kukwira kwevhiri kana kupera kwevhiri.
• Brass valve fit uye polish chrome plated simbi kupera kuita ngura uye kusaita ngura kutsungirira hupenyu hurefu.
• Dual foot inflator geji inogadzirwa neheavy duty cast aluminium body yehupenyu hurefu nekusimba.
• Dual head chuck inoita kuti vheruvha yevhiri iwanikwe.
• Ose mavharuvhu makaturiji uye geji yerutsoka ruviri inflator geji inogona kutsiviwa.
• Yakashongedzerwa zvakakwana neZinc alloy die casting body w/ yakashata matte nhema poda yakavharwa kupera
• Kesi yedziviriro pamusoro pe dial geji yekudzivirira, inoshingirira kuoma kwegaraji repamba kana kushandiswa kwechitoro chekutengesa.
• Push-to-Inflate air filler thumb trigger, uye yakavakirwa-mukati air bleeder valve kukurumidza kufefetera pasi matayi akawandisa.
• High precision gauge yakashongedzerwa nesimbi imba, calibrated 10 - 220 PSI.
• 1/4” NPT inopinza, BSP shinda iripo zvakare
• 5 tsoka inochinjika rabha hose ine swivel air chuck connector